फेब्रुअरी ८ सिद्धार्थ होटलको कम्फरटेबल ओछ्यानमा अनि न्यानो हस्पिटालिटीमा राम्रो निद्रा आयो। जिआरले पनि चुरोट नगनाउने कोठा भेटेछन्। फेरि आफू नेपालगन्जमा पश्चिमेली नागरिकका सम्पादक हुँदा उनले लामो समय यही होटेलमा बिताएका रहेछन्। बिहानका चियाबीच नेपालगन्जमा रहेका जुँगे महादेवको चर्चा भयो। मह...
फेब्रुअरी ७ हिजो अन्त्यमा गुडनाइट लिएर सुतेका जिआरएलको नाइट खासै गुड भएनछ। रातभरि उनी कराइरहेको भनी सुरेशले थपेपछि उनले आफूलाई ऐंठन भएको तथ्य खोले। उनी त्यसमै पनि सकारात्मक थिए। ठीकै छ, ममा केही देखेछन् र तर्साउन आएछन्। दुई-तीन आत्मा मसँग कुरा गर्न आए र मैले ‘हेर मैले केही बिगारेको छैन। तिम...
फेब्रुअरी ६ फ्रेस भएर फटाफट भैरहवातिर लाग्यौं। ब्रेकफास्ट पवनकहाँ हुने भो। सुरेशजीलाई अब 'होस्टप्रेसरले' समात्न थाल्यो। हाम्रो अति अपेक्षाले सुरेशजीलाई ठूलो दबाब दिएको थियो। बुटवल भैरहवा सड्कका दायाँबायाँ राम्रा डिजाइनका घरहरू र एउटा अर्कै समृद्धि अनुभव गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी ल...
फेब्रुअरी ५ आमालाई धेरै प्रकारले सम्झिइन्छ है? जस्तै– खाना। बिहानको ब्ल्याक टी को पहिलो सिपमै सुरेशजीले मिलियन डलर स्टेटमेन्ट बोले। कोठाभित्र जिआरएलको प्रवेश भयो। सुरेश : तपाइँलाई सञ्चो भयो? जिआरएल : छैन। सुरेश : तपाइँ झन् गल्नु भा’छ। जिआ...
फेब्रुअरी ४ साधारण बिहानीबाट दिन सुरु भयो। पिआर र जिआरएलको नो जगिङ, ब्लाक टी, फलोड बाई मिल्क टी। खुब मीठो ब्रेकफास्ट खुवाउँछु भनेर पिआरले एक राउन्ड पूरै घुमाए। आखिर उनले भनेको पसल त हामी बसेको होटेलभन्दा दुई घर पर पो रहेछ। सोध्दासोध्दा बल्लबल्ल भेटिएको पसल आखिर बन्द। हामीले बसेकै होटेलमा खुब मीठो...
३ फेब्रुअरी ठण्डा मतलब कोकाकोलाजस्तो चिसो। काठमाडौंमा चिसो खानुपरेन तर यहाँ आएर खानुपर्यो। बिहान प्रभात दाइको गनगनले निद्रा खुल्यो। ‘बूढा मोजा लगाउन चाहिँ अल्छी मान्ने अनि सिरकबाहिर खुट्टा राखेर चिसो भयो भन्ने?,’ प्रभात दाइको यस्तो हल्ला हाम्रो यात्राको आकर्षण बन्यो। जिआरएलल...
२ फेब्रुअरी। ‘बुझ्यौ सनत,’ सुतिरहेको मलाई उठाएरै पिआरले भने, ‘देशमा लगातार बिजी एउटै चिज छ। त्यो हो सर्किट।’ म सहनै नसक्ने गरी हाँसें। एकाबिहान कसैलाई मोबाइल ट्राई गर्दागर्दा उनी दिक्क हुने गरी थाकेछन्। आज न पिआर जगिङमा गए जिआरएल नै। शनिबारको बहाना सजिलो भयो। ...
फेब्रुअरी १। बिहानको ब्ल्याक टि सेवनपछि आज पनि जगिङको नाटक सुरु भयो। आजको यो नाटकमा दुई पात्र थपियौं सुरेशजी र म। विराटनगरको रत्ना होटेलबाट अलि अघिसम्मको बाटो पनि नपुग्दै सुरेशजीले यात्रा छोडे। उनले गेस्ट एपिएरेन्स मात्र दिए। तर अचम्म, म रानीसम्म दौडिएँ त्यो पनि दुइ बुढाहरूलाई उछिन्दै। स्ट...
जनवरी ३१ आज पनि बिहानको कालो चियाले चाँडै निद्रा खुलायो। पिआर र जिआरएल फेरि जगिङको नाटकमा लागे। उनीहरू फर्केपछि हामी फेरि हिजोकै मिठाईपसलमा ब्रेकफास्ट लिन गयौं। पुरी–तरकारी, दही, रसवरी, दूधवरी, फेरि जेरी, फेरि पुरी फेरि तरकारी, कलाकन्द आदि खाएपछि मात्र हाम्रो सानो ब्रेकफास्ट सकियो। सुरेशजी...
जनवरी ३०, प्रभात दाइ बिहानै कुनै अंग्रेजी गीतमा रमाएर खुट्टा हल्लाइरहेका थिए। बिहानको करिब ५ बजे ..., ‘ब्रो ब्ल्याक टि खाने ?’ उनले सोधे। मलाई डिस्टर्ब त भइरहेको थियो। तर, ब्ल्याक टि को लोभले मलाई तान्यो। सायद उनले मलाई लोभ्याएका थिए। सफल भए। अब सुरु भो यो टुरको अर्को महानाटक। गुणराजज...
जनवरी २९, २०१३ ‘थ्यांक यु प्रकाश,’ मेरो सामान राखिदिए पछि भाइलाई यसै भन्दै म गाडी चढें। मलाई सानु, प्रभात दाइ र गुणराजजीले स्वागत गरे। त्यसपछि हामी सुरेशजीलाई लिन सानेपा पुग्यौँ। नजिकैको पेट्रोलपम्पमा गाडीले तेल भरेपछि हामीले सामूहिक तस्बिर खिच्यौं –क्लिक क्लिक। अब हामी...
( यात्रारत नियात्रा ) प्रस्तुत अभिव्यञ्जनाहरु कसैलाई खुसी वा दुःखी पार्न लेखिएका होइनन्। संयोगवशः एउटा यात्राले केही हप्ताका लागि हामीलाई जोड्यो। तीन सहयात्रीसहितको त्यो यात्रामा मैले देशका बारेमा जे देखें त्यही लेखें, जे कुरा साथीहरूमा भेटे त्यही लेखें, जे भवना म भित्र सलबलाएर आयो त्यही लेखें र यो...